चीनले बिरालोबाट भारतमा कोरोना भाइरस पठाएको तथ्य भन्दै हंगामा ! — SuchanaKendra.Com
चीनले बिरालोबाट भारतमा कोरोना भाइरस पठाएको तथ्य भन्दै हंगामा !
काठमाडौं । चीनबाट आउँने जनवारसँग कोरोना भाइरस भएको शंका गरिएको छ । आईएएनएस कोरोना भाइरस बिस्तारै महामा रीको रूप लिदै छ । अहिलेसम्म विश्वभरि ३ हजार भन्दा बढी मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् । अब कोरोनाले भारतमा आफ्नो क्षेत्र जमाउन थालेको देखिएको छ ।
हालसम्म कूल ६ वटा घटनाका रिपोर्ट विश्लेषण गरिएको छ । भारतमा कोरोना भाइरसको कारण अराजकताको वातावरण छ भने चेन्नईको बिरालोले एउटा अनौंठो स्थिति सिर्जना गरेको छ। चेन्नई बन्दरगाहका अधिकारीहरूले भने बिरालोको क्रियाकलाप एकदम शंकास्पद छ । यो बिरालो चीनबाट कन्टेनरमा राखेर ल्याइएको हो । यो कोरोनाबाट प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई चीन फिर्ता पठाउनु पर्छ भन्दै त्यो बिरालो चीन नै पठाइएको छ ।
तर यो विषय पेटा, पशु अधिकार संगठनले बिरोध गरेको छ । भनिन्छ यो बिरालो चीन भन्दा २० दिन अघि कन्टेनर लिएर चेन्नई बन्दरगाहमा आएको थियो। चीनमा पठाइएको खण्डमा यसको बाँच्न सक्ने सम्भावना कम छ। पेटा इंडियाकी रश्मि गोखलेले चेन्नईका अधिकारीहरुलाई एक पत्र पठाईएकी छन् र यो वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित भएको छ कि बिरालाहरुले न त कोरोना भाइरस संक्रमण लिन सक्छ न अरुलाई पनि सार्न सक्छ।
चेन्नईका अधिकारीहरूले बिरालालाई आफ्नो मूल देशमा पठाउन सिफारिस गरेकाले पेटाले बिरामीलाई कन्टेनर भित्रबाट कहाँबाट आएको हो भनेर निर्धारण गर्न गाह्रो भइरहेको छ। उनको तर्क छ कि चीन बाट भारतको यात्रा १० देखि २० दिन सम्म रहन्छ, त्यस्तो दिनमा खाना र पानीबिना बाँच्न गाह्रो छ। यसले यो चीनबाट आएको हैन । यो भारतकै हो ।